Tabaruc | BGA
Miyaa macnaheedu tahay inaan ku tabarucno dugsiga dadweynaha?
Jawaabta oo kooban waa in ay macnaheedu tahay wax kasta - ardayda, macallimiinta, qoysaska, iyo bulshada. Sanad walba, marka Magaalada Boston ay abuurto miisaaniyadeeda, waxay u qoondeysaa lacag dhan Wasaaradda Waxbarashada, oo markaa u qoondaysa qaddar doollar degmo kasta, iyadoo la adeegsanaayo qaacido lagu dhisayo "miisaanka" iskuulada leh baahiyada ka sareysa kuwa kale. Mid ka mid ah degmooyinkaas, Dugsiyada Dadweynaha Boston, ayaa markaa qaybinta u qaybiya 57 dugsi ee ku yaal degmada, oo ay ku jiraan Boston Green Academy.
Maaha wax qarsoon oo ah inaysan jirin lacag ku filan oo lagu bixiyo ardayda DDB oo ay kujiraan taageero buuxda iyo fursado ay degmo badan oo karti lihi ku leeyihiin. Laakiin halkaan ayaa ah halka ay fursado kuu tahay inaad isbeddel ku sameyso. BGA waa dugsi Horace Mann ah taas oo macnaheedu yahay, marka lagu daro lahaanshaha madaxbannaanida shaqaalaynta, horumarka manhajka, iyo waxbaridda iyo barashada, waxaan sidoo kale aruurin karnaa lacag lagu kabo qoondaynta miisaaniyadeena oo aan ku bixinno taageero tacliimeed, bulsheed iyo mid shucuureed, kobcinta iyo dibedda -fursadaha iskuulka.
Kaliya xoogaa fursado cajiib ah oo tabarucid ah oo caawinaya siinta ardayda BGA waxaa ka mid ah safar ay ku tagto Puerto Rico si ay gacan uga geysato dadaallada nadiifinta ka dib Hurricane Maria, safarka kooxda MORE ee ragga ee Washington DC, iyo casho-sharafta Thanksgivingkeena.
The Boston Green Academy Foundation, oo ah 501 (c) 3 urur, waxaa loo sameeyay ujeedka kaliya ee lagu taageerayo Boston Green Academy iyo dhamaan dadaalada aruurinta.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Boston Aasaasaha Ammaanada ee Boston Green Academy.
La soco Warbixinta Sannadlaha ah ee 2019